EPE Furo Pipe Machine - China Longkou Fushi kurongedza
PS Furo Chikafu Mudziyo Wekugadzira Line
PS Furo Sheet Inowedzera Mutsara
PS Foam Kudzokorora Muchina
Isingazivikanwi Net Bhegi Kupisa Kuisa chisimbiso Machine
Pe / PP Knotless Net Muchina
Pe Cap Cap Linier Sheet Inowedzera Mutsara
PS Furo Kuzvigadzira Patsva Machine
Pe Foam Kuzvigadzira Pfupi Machine
Zvibereko & Muriwo Rolling Sizing Machine
Global Market Kugoverwa
Epe Furo Sheet Muchina
Epe Foam Pipe Muchina
PE / PP Knotless Net Inowedzera Mutsara
Iyi EPE furo chubhu / tsvimbo extrusion muchina inogona kuburitsa EPE furo chubhu
/ pombi / tsvimbo / tsvimbo, inova mhando yerudzi nyowani inopupuma fuma zvinhu uye inoshandiswa zvakanyanya seye
mhepo yekuisa chubhu mumuhara, dziva sosi, toy toyrairail, nezvimwe nekuda kwekunaka kwayo. furo,
kusimba uye kupisa kuchengetedza hunhu.
THE MAIN Technical Magadzirirwo:
Ongorora: Iyi data yataurwa pamusoro ndeye chete yako mareferenzi uye isu tinochengeta kodzero
dzekushandurwa kwechinhu uye chimiro chemuchina. Izvo zvirimo zvirimo zvine chekuita
nekutenga kwemidziyo zvinofanirwa kunge zviri pasi pechibvumirano.
Yakavambwa muna1994, Longkou Fushi Kurongedza Machinery Co., Ltd yakagadzira CE Certified Plastiki Extrusion Machinery, Vacuum Achigadzira Mushini, Zvibereko Kuchenesa, Waxing & Grading Machine, PS / EPE furo Sheet Extrusion Line, EPE furo Net Extrusion Line, XPS Foam Board Extrusion Line, Pe Cap Liner Foam Sheet Extrusion Line, PE / PS Kudzokorora uye Pelletizing Line, zvachose anopfuura makumi maviri marudzi emuchina, ayo anoshandiswa zvakanyanya muminda yemichero kugadzira & kugadzira, fenicha kurongedza, chikafu, zvekurapa zvishandiso & zvemishonga, elektroni, hunyanzvi & hunyanzvi, maindasitiri ekuvaka, etc.
Tiri mumwe vaitungamirira Vagadziri chiputiriso zvinhu uye anoenderana michina. Mumakore gumi makore kukura, tiri zvikuru ruzivo michina mukugadzira. With kumusika mugove kuwedzera nokukurumidza gore negore, kutengesa mishonga yedu zvishoma kuwedzera. Chokupika michina yedu nguva dzose pamusoro aitungamirira panzvimbo zvichienzaniswa zvakafanana zvigadzirwa pamisika zvichienderana unhu uye mutengo.
Zvichienderana kumusoro zvigadzirwa yepamusoro uye kwazvo pashure-okutengesa basa, kambani yedu anonakidzwa mukurumbira mukuru pakati makasitoma edu. The zvigadzirwa vari kutengesa zvakanaka zvinopfuura 20 mumatunhu ari China, uye aivigirwa kunyika dzinoverengeka uye nemaruwa. Our chakanakisisa pashure-okutengesa basa vaigona hunovimbisa dzose zvekushandisa kutsigira vatengi vedu.
Tiri kufara kugamuchira epamba uye mhiri kwemakungwa neshamwari kutishanyira uye pamwe nesu.
Kavha Yedhisheni: Export standard kurongedza
Dhirivhari Dhata: inotumirwa mumazuva makumi matatu nemashanu mushure mekubhadhara
1.Longkou Fushi Kurongedza Machinery Co., Ltd yakagadzira CE Certified Plastic Extrusion Machinery, Vacuum Achigadzira Machine, Michero Kuchenesa, Waxing & Grading Machine, PS / EPE furo Sheet Extrusion Line, EPE furo Net Extrusion Line, XPS Foam Board Extrusion Line, PE Cap Liner Foam Sheet Extrusion Line, PE / PS Kudzokorora uye Pelletizing Line, zvachose anopfuura makumi maviri marudzi emuchina, ayo anoshandiswa zvakanyanya muminda yemichero kugadzira & kugadzirisa, kurongedza fenicha, chikafu, zvigadzirwa zvekurapa & zvemishonga, elektroni, hunyanzvi & hunyanzvi, maindasitiri ekuvaka, nezvimwe.
2. Strict mhando kudzora system.
3.Ikukurumidza kutungamira nguva kupfuura vatinokwikwidza.
4. Yakanakisa mhando nemutengo unonzwisisika.
5. Strong technical technical technical data, kudhirowa, nezvimwe.
6. Cable mhinduro kune ako chaiwo zvaunoda.
Mubvunzo:. Nei ndichisarudza kambani yako?
A: 1) Isu tiri mumwe wevanotungamira vagadziri vekutakura zvinhu nemimwe michina inoenderana.
2) boka redu inowanikwa 1994, vane makore anopfuura 20 pamwe simba ruzivo uye yemhando unyanzvi
3) Best Quality & Best Service pamwe zvemakwikwi mutengo. 1 gore garandi uye lifetius chengetedzo
4) Tine CE chitupa uye ISO 9001 zvitupa.
5) Tine timu yehunyanzvi yehunyanzvi, uye inozopa maawa makumi maviri nemana
Mubvunzo: Inguva yakareba sei muchina? Ndekupi kwatinogona kutenga zvikamu mushure mekuvimbiswa?
A: Iyo vimbiso ndeye gore rimwe. Ticharongedza zvakakwana zvikamu zvemuchina wega wega kutsigira gurantee yedu, uye kana zvikamu zvikakuvadzwa muvimbiso, tinokutumira zvikamu zvitsva zvemahara nemhepo. Uye timu yedu yehunyanzvi yehunyanzvi inogona kupa rutsigiro rwekure kureraira nekugadzirisa dambudziko rako.
Izvo zvikamu zvikuru isu tese tinoshandisa nyika inozivikanwa mhando, saSieusns, Mitsubishi, ABB, Schneider nezvimwewo izvo zviri nyore kuti muchengeti atenge. Uye sous tsika dzakagadzirwa-zvikamu, isu tinokutengesa iwe pamutengo wemutengo.
A: Fekitori yedu iri muLongkou guta, mudunhu reShandong, unogona kubhururuka kuenda kuYantai Penglai International Airport.Kana iwe uchisimbisa kubhururuka Nha. Uye tius, ndapota tiudze isu ipapo tichakutora kuAirport.
Yedu nhoroondo kero ndeiyi:
Longkou Fushi Kurongedza Machinery Co, LTD.
Zip kodhi: 265709
Mubvunzo: Chii chandinofanira kugadzirira kunze kwekugadzirwa kwezvinhu?
A: Unofanirwa kugadzirira musangano, kutonhora system yemvura, simba, compressor mweya.
Next: Pe Foam Sheet Kuwedzeredza Machine
Epe Foam Sheet Ndakasarudza Machine
Pe Foam Sheet Extrusion Machine / Line
Pe Foam Sheet Ndakasarudza Machine
Pis Foam Food Bowl Mukudhinda Line
Pis Foam Food Container Box Production Line
Pis Foam Food Container Ita Machine
Pis Foam Food Container Kuita Line
Pis Foam Food Container Kuita Machines
Pis Foam Food Container Production Line
Pis Foam Plate Extrusion Line
XPE Foam Sheet Wall Sticker Kugadzira Muchina
PS Furo Kupwanya Uye Granulating Machine
Fully Automatic Double Screw PS Furo Kupwanya A ...
FS-YTA600 / 1000 Vacuum Achigadzira Kucheka kuisira ...
FS-FPP105-120 PS Furo Sheet Kuwedzera Mutsara
Runhare: +86 535 8522119